Getty Images ဗစ်တိုးရီးယားပျားဓါတ်ပုံပညာ
Cannabidiol (ပိုကောင်း CBD အဖြစ်လူသိများ) လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်အတွက်နှစ်ဆတိုးလျက်ရှိသည်. ဒါဟာနိုင်မည်ဆို ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှ သို့ အရာအားလုံးပေးအပ်, နာကျင်မှုကနေစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ရန် , ဒါပေမဲ့အဲဒီတောင်းဆိုမှုများစစ်မှန်တဲ့များမှာ? MH ပိုမိုနီးကပ်စွာကြည့်.
ဒါဟာပေါင်းပင်ရဲ့, ဒါပေမယ့်သင်ကမသိအဖြစ်. Cannabidiol, CBD ၏, အဆိုပါလျှော်စက်ရုံတစ်ရုက္ခဗေဒထုတ်ယူဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာ THC သာသဲလွန်စပမာဏပါဝင်ပါတယ် (ပေါင်းပင်တရားမဝင်ကြောင်း psychoactive ပစ္စည်းဥစ္စာ). ဤသူသည်သင်တို့အမြင့်ဆုံးမရဦးမည်ကိုဆိုလိုသည်, ဒါပေမယ့်လည်းသင်ကသူ့ကိုဝယ်ဖို့မှောင်မိုက်ပြတင်းပေါက်နဲ့ Opel Vauxhall Corsa အတွက်တွေ့နေရတယ် bloke တွေ့ကြံမ.
အဘယ်အရာကို CBD ကတိပေးထား?
အကြိုလေ့လာမှုများ CBD အကျိုးရှိသောကြောင်းအကြံပြု (အသက်ပြင်းပြင်းရှူ) အိပ်ပျက်ခြင်း , အသည်း, စိတ်တိုအူသိမ်အူမ syndrome ရောဂါ , obsessive compulsive Disorder, အရိုးပွရောဂါ, PTSS, လေဖြတ်ခြင်း, နှလုံးရောဂါ, စိတ်ကျရောဂါ , ဆီးချိုရောဂါ အဆစ်များတွင်. အများဆုံးအလားအလာအားသာချက်များ၌အိပျ ထိန်းချုပ်စိုးရိမ်ပူပန် ; အချိန်မီ, ခေတ်သစ်စိတ်ကျန်းမာရေး၏ဝန်ပြည်နယ်ပေးထား.
သူတို့ရဲ့နာတာရှည်နာကျင်မှုတစ်ခုလေ့လာမှုနီးပါးတဦးတည်းတဆယ်အတွက်အသုံးပြုသူများအအစီရင်ခံတင်ပြ, ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် angst လုံးဝခဲ့ကြသည် CBD အားဖြင့်အနာကိုပျောက်စေ, ယူနိုက်တက်လူနာများမဟာမိတ်အဖွဲ့ Jon Liebling ပြောပါတယ်. ထိုသို့ရောဂါများကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်ဟုတောင်းဆိုမှုများပေမယ့်, ပိုပြီးသက်သေအထောက်အထားမလိုအပ်, သုတေသနတက်ငယ်များအနေဖြင့် frolic ဖို့မမျှဆေးဝါးကုသမှုအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်.
ယာကုပ်အမျိုးကို Hooy CBD ရေနံ 5% 10ml
သင်ကယူသတိရခဲ့လျှင်, ယခုအကောင်းတစ်ဦးအချိန်. ထိုကဲ့သို့သောဟော်လန်အဖြစ် Big အမှတ်တံဆိပ် & Barrett နဲ့ကနျြးမာရေး Span ကကယ်တင်, of bieden hun eigen assortiment aan – wat geruststellend is, သင်သည်သူတို့သန့်ရှင်းစင်ကြယ်နှင့် ပတ်သက်. တင်းကျပ်သောဥရောပသမဂ္ဂလမ်းညွှန်ချက်များလိုက်နာစိတ်ချပါအရာကြွင်းသမျှနိုငျသောကွောငျ့, သောက်သုံးသောနှင့်ညစ်ညမ်းမှု. လွတ်လပ်သောအွန်လိုင်းလက်လီရောင်းချသူများအဘို့တူညီဆိုပါတယ်မရနိုင်, ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့မြွေရေနံကနေဝေးနေပါ.
ယာကုပ်အမျိုးကို Hooy CBD 60 တောင့ 600 မီလီဂရမ်
အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမဟုတ် Touch ကို. CBD-ထိုးမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုလုံးဖြစ်ပါသည်. လွန်းနည်းနည်း ယူ. သင်တို့သည်အလျှင်းမခံစားရပါလိမ့်မယ်; အလွန်အကျွံနှငျ့သငျထိုကဲ့သို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအန္တာရာယ် ဝမ်းပျက်ခြင်း , အအေးဖြစ်ပါတယ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်မဟုတ်, လူကို. ဆေးထိုးသို့သုတေသနနေဆဲမြူဆိုင်းလျက်ရှိသောဖြစ်ပါသည်, dus bouw langzaam op om uw eigen “Goudlokje-zone” te vinden.
ခံစားနေရပြီးကယ်တင် မကြာခဏဗီတာမင်တစ်ဦးက, စိတ်ဖိစီးမှု၏ရောဂါလက္ခဏာများကိုထိန်းချုပ်ကကူညီပြသခဲ့ပြီးသည့်ဓါတ်တိုး.
ဟော်လန် & Barrett ဗီတာမင် A 3300 IU သည် 100 softgelcapsules
1.000 တစ်နေ့လျှင်မီလီဂရမ် (ဆိုသမျှ Latt အတွက်ထက် ပို.), ဒါပေမယ့် curcumin ကအစွမ်းထက် Anti-inflammatory ပါရှိသည်.
ဟော်လန် & Barrett အော်ဂဲနစ်နနွင်းမြင့်သောအစွမ်းသတ္တိ, ငရုတ်ကောင်း 90 တောင့ 600 မီလီဂရမ်
အရိုးနု၏အဆောက်အဦလုပ်ကွက်တစ်ဦးအဖြစ်, အရွတ်နှင့်အရွတ်, အဆိုပါ creaking အဆစ်ဖြေရှင်းနိုင်.
ဟော်လန် & Barrett အပို Kracht Glucosamine Chondroitin Complex 120 Caplets
ဟော်လန် & Barrett မဂ္ဂနီစီယမ်သွပ်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး 100 တက်ဘလက်